UKUGXILA L Ashere is a China famous manufacturer of industrial laser equipment. Since 2008, Focus Laser founder involed into the development and production of various types of laser equipments. We only focus on lasers, so our brand became FOCUSLASER.
Imikhiqizo yethu zihlanganisa izinhlobo ezintathu eyinhloko imikhiqizo fibre laser wokugubha umshini, CO2 laser wokugubha umshini kanye laser UV wokugubha umshini. Kususelwa laser ubuchwepheshe bethu thina yaba 3D fibre laser lokuqopha umshini (Deep lokuqopha umshini), Dynamic UV laser lokuqopha umshini, umshini Dynamic CO2 laser engaving umshini, laser flying wokugubha, fibre laser cutting umshini, laser Welding umshini nokunye.
Bangaphezu kuka-20 chungechunge. Imikhiqizo ngendlela ethandwa nguwe kanye nezinsizakalo ukunikeza amakhasimende nge inzuzo enkulu. Ngenxa izinga okusezingeni eliphezulu imikhiqizo yethu futhi ukusebenza onokwethenjelwa, basuke kabanzi electronics, hardware, imodeli ukwenza, izingubo, izicathulo, ukukhangisa, umsebenzi wokunyathelisa nokuthutha emabhokisini ithoyizi ukwenza, kanye nezimboni ngaphezulu.
Okuqinile Q uality mina nspection For Machine
Ukuqinisekisa ikhwalithi ukuzinza umshini, UKUGXILA laser usebenzisa eziphambili kakhulu ukukhiqizwa nokuhlolwa imishini, kuhlanganise lasers imitha okuyinto amazwe kusuka USA, CNC imishini ukugaya, ukuskena esibukweni, AC voltage variable amandla Emulator ezinzile, uhlelo focus.
Futhi sisebenzisa thermostat Igumbi sokulinganisa, 3D ithuluzi lokulinganisa, laser dynamometers, ibhuloho digital, futhi imishini eziphambili ukuhlola ikhwalithi kanye nokusebenza kwethu zezimboni imishini laser Isinyathelo ngasinye zokukhiqiza ukuqinisekisa izinga umshini yethu nokusebenza esitebeleni.
Izindleko C ontrol
FOCUSLASER inikeza ezingabizi, eliphezulu umshini. Nge izinzuzo China, azuze ngokugcwele ngokwemigomo izinga kanye nezindleko, kwempahla Izingxenye ezisemqoka ezivela eJalimane nase-United States, eJapane, Taiwan kanye assemblying nokukhiqiza e-China. FOCUSLASER best supply chain-system for izingxenye kanye izingxenye, futhi irekhodi esiqinile izinga nemibono emisha, ukufakazisa ukuthi wethu iminyaka engu-10 ukusebenza umshini.
FOCUSLASER iletha ithalente lochwepheshe nobuchwepheshe, has a izisebenzi abaqeqeshiwe. Kusukela ukuthuthukiswa software ihadiwe design, uhlelo ukuhlolwa, imisebenzi yezobuchwepheshe kuyaqedwa ngabasebenzi abaqeqeshiwe futhi lobuchwepheshe.
FOCUSLASER eseke 23 hardware ne-software patent tech high ensimini. Sine lisebenza R & D eside nesipiliyoni uchichima laser ensimini futhi thina "Enterprises Hi-Tech" e China.
indawo Focus Laser sika ezindawo inikeza eziningi amathuba zinciphise izindleko zokukhiqiza, ngaleyo ndlela kuncishiswe amanani ethu. Indlunkulu FOCUSLASER itholakala e Guangzhou yaziwa nangokuthi Canton mayelana 120 km (75 mi) enyakatho-ntshonalanga ye-Hong Kong futhi 145 km (90 mi) enyakatho Macau, Guangzhou inomlando phezu 2.200 iminyaka futhi kwaba Terminus ezinkulu zasolwandle Silk Road njengoba eqhubeka ekhonza njengomxhumanisi enkulu port, izitholele nezinto zokuya ihabhu namuhla, kanye komunye wemizi ezintathu ngobukhulu China sika. Sikuphi best imikhiqizo lelihambisana uhlelo kungenziwa kalula esethula eziphambili kakhulu ubuchwepheshe futhi ukukhiqizwa imishini, amakhono, kanye ngokusebenzisa ezihlukahlukene ezokuthutha zasolwandle kanye emoyeni, siyakwazi ukunikeza eliphezulu laser imishini nge intengo imali.
Quality umkhiqizo ukusebenza idumela elihle, FOCUSLASER imikhiqizo akuzona kuphela ethengisa yimpumelelo e-China, kodwa futhi akhishwe zithunyelwe emazweni angaphezu kuka-90 kanye nezifunda emhlabeni, kuhlanganise: eJalimane, e-USA, i-Italy, eRussia, Japan, South Korea, Turkey, Brazil, India, i-United Arab Emirates, Saudi Arabia nakwamanye amazwe, imikhiqizo zingaphansi ukwamukelwa okukhulu ukubonga nokudumisa. Thina njalo baziswa amakhasimende bakwethembe nozime FOCUSLASER.
Ukuze unikele lokuzivocavoca nemishini ephambili nge intengo engcono, futhi inikeza wanelisekile emva-sales service ukuze ikhasimende.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana nokuthi imishini yethu laser, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi